Maalinta Cosmonautics ee dugsiga waa qoraallada dhacdooyinka saacadaha fasalka, baaritaan, riwaayad. Maalinta Cosmonautics ee Dugsiga Hoose
Maalin xiiso leh cosmonautics ee dugsiga: dhacdooyinka dhacdooyinka - saacadda fasalka, tartanka, riwaayad. Qawaaniinta saacadaha madadaalada ee dugsiga hoose ee Maalinta Astronautics
Qabashada Maalinta Aqoonsiga ee Dugsiga waa mid faa'iido leh, madadaalo iyo wargelin ayaa gacan ka geysan doonta inay si sax ah u soo dejiyaan dhacdooyinka dhacdooyinka. Waxbarashada guud ee hoolka shirarka, waxaad qaban kartaa tartamada, bandhigga ama riwaayad. Si loo qiimeeyo macluumaadka la helay iyo in lagu ogaado xogta cusub ee dugsiga hoose, waxaa lagula talinayaa in lagu qaato saacad kale oo fasal kale ah tartan iyo tartamo kale. Intaa waxaa dheer, waxaad ku bari kartaa carruurta inay diyaariyaan sheekooyin u gaar ah xafladaha. Isaga oo la sheekeysta ardayda fasalka, caruurtu si fiican ayey u fahmi karaan waxtarka, ka dibna ugala hadal xiisaha macalinka.
Maalinta Maalinta Faa'iidada leh ee dhacdada munaasabadda ka dhacda dugsiga - xaflad loogu talagalay macalimiinta
Way sahlan tahay in la barto adduunyada boosaska, qaababka iyo guulaha boosaska dugsiga ee ku jira foomka riwaayadaha. Munaasabadaha noocan oo kale ah, waxaa habboon in la sameeyo hannaan xiiso iyo waxtar leh, ka dibna si fudud u raac. Si taxaddar leh u shaqeynaya barnaamijka ayaa fasaxa Maalinta Astronautics ee dugsiga ee la xasuusan karo iyo madadaalo. Waxay ka codsan doontaa labada macalin iyo ardayda dugsiga hoose.
Waa maxay hawlaha loo qabanayo Maalinta Muuqaalka Astronautics ee iskuulka sida waafaqsan duruufaha?
Xaflad loogu talagalay dugsiga oo dhan ayaa loo tixgelin karaa xal wanaagsan. Inta lagu jiro, ardayda dugsiga sare iyo sare waxay awoodi doonaan inay sheekooyin xiiso leh ku muujiyaan qoob-ka-sheegeyaasha caanka ah iyo injineernimada kuwaas oo dhisay rakaabka iyo maraakiibta. Laakiin xasuusinta iyo xaqiijinta aqoonta la helay, saacad qaali ah oo leh su'aal waa mid aad u fiican. Inta lagu jiro dhacdooyinka noocaas ah, caruurtu waxay awoodi doonaan inay hubiyaan inta ay ka baranayaan munaasabadda, iyo waxyaabaha ay tahay in ay si faahfaahsan u bartaan.
Fikradaha lambarrada waxtar leh ee loogu talagalay Maalinta Astronautics ee macallimiinta dugsiga
Sameynta dhacdooyinka maalinta Astronautics ee dugsiga hoose, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho qaababka iyo "waxqabadka" labadaba. Tusaale ahaan, nambarada noocyada soo socda ayaa lagu dari karaa barnaamijka fasaxa:
sheekooyin xiiso leh oo ku saabsan cosmonauts ama sahammo bannaan;
Muujinta tijaabooyinka xiisaha leh (tusaale ahaan, roogagga qulqulaya ee dhalooyinka);
qiyaasida magacyada xiddigaha, xiddigaha;
Aqoonsiga dadka daawadayaasha ah ee la socota xayawaanka xayawaanka ah.
Intaa waxaa dheer, waxaad ku dari kartaa bandhig aad ku muujinayso dayaxda xiddig ee jira. Kooxo aan caadi ahayn ee xiddigaha waxay qaadan karaan qaab indhaha, saacadaha, xayawaanka. Waxaad bari kartaa martida munaasabadda si ay u qiyaasaan sida tan ama mashiinka loo yaqaan. Ku darso munaasabada soo socota ee lagu soo bandhigay heeso leh heeso ku saabsan boos iyo daraasaddeeda.
Sidee loo qabtaa Maalin Astronews Day ee iskuul caadi ah ee ardayda dugsiyada hoose?
In lagu daro waxqabadyada ka baxsan iskuulada dhamaan ardayda dugsiyada iyo macallimiinta ayaa sidoo kale leh saacado fasal oo loogu talagalay mawduuca cilmi baarista. Waxay ku dari karaan qaababka carruurta ama ka tagaan oo kaliya macallinka hadalka, kaas oo u sheegi doona macluumaad xiiso leh oo faa'iido leh. U hubso inaad ku darto dhacdooyinka Maalinta Astronautics ee dugsiga oo ka wada hadla macluumaadka la tixgeliyey. Tani waxay kaa caawineysaa inaad fahamto waxa fudud oo sahlan inaad xasuusato.
Shaqooyinka xiisaha leh ee ardayda loogu talagalay Maalinta Astronautics ee Dugsiga Hoose
Carruurtu waa in lagu dhajiyaa Maalinta Cosmonautics si loogu soo saaro alaab gacmeed, ama, haday tahay inta lagu jiro casharrada foosha, si loogu dhigo fasalka. Hawlaha kale ee muhiimka ah ee ka caawin doona carruurta inay wax badan ka bartaan cosmo-mareeriyada waxaa ka mid ah:
diyaarinta warbixin yar oo ku saabsan mid ka mid ah cosmonauts (ama astronauts xoolaha);
ururinta macluumaadka xiisaha leh ee wargeyska derbiga;
wax soo saarka sawirada midabka leh;
Diyaargaroobidda sawir galka (ama mawduuc kale) si loogu qabto bandhig.
Iyadoo waqti yar ku qaatay wakhti yar, carruurtu waxay horey u leeyihiin fikrad ka mid ah adduunka cosmonautics. Tani waxay ka caawineysaa inay si fiican u fahmaan macluumaadka ay ka helaan macalinka.
Waa kuwee mowduucyada aan ka fiirsanayo ardayda dhigata iskuulada On Cosmonautics Day?
Si aad dhab ahaantii xiiso u leedahay ardayda dhigata saacadaha fasalka ama xaflad xafladeed, waxaad u baahan tahay inaad siiso macluumaad faa'iido leh oo xiiso leh oo ku saabsan adduunyada boosaska. Tusaale ahaan, waxaa suurtogal ah in la qabto bandhig ku saabsan Maalinta Cosmonautics ee dugsi hoose ee dugsiga hoose, halkaas oo carruurtu si fudud u akhriyi karaan:
oo leh cosmonauts ugu caansan (si aad u diyaarisid istaag leh sawirro iyo joornaalo);
oo leh qalabyo kala duwan (samaynta jilbaha diyaaradaha);
iyada oo ay jiraan caddaynta jirta ee jiritaanka UFO-yada (farriimaha wargeysyada hore ee qaabka daabacaadda waxaa loo isticmaali karaa sawirada).
Macluumaadka aadka u xiiso badani waxay noqon doonaan, xiisaha badan ee caruurtu u socon doonaan inta u dhaxeysa taallooyinka waxayna helaan macluumaad cusub oo faa'iido leh. Si gaar ah, waxaad ku dari kartaa wargeyska derbiga oo leh xogta ugu xiisaha badan: sida duulimaadkii ugu horreeyey u dhacay, waxa cosmonauts wax cuno, haddii dad iyo xayawaan ayaa loo diraa meel bannaan.
Maalinta Cosmonautics Maalinta leh ee iskuulka ka socda - saacad aan caadi ahayn
Saacad yar oo qaali ah oo loogu talagalay mawduuca ayaa si dhammaystiran u buuxin doonta casharka yar ee loogu talagalay ardayda fasalka. Waxay awoodi doonaan inay helaan aqoon cusub, oo si wadajir ah ugu qoslaan, si ay u hubiyaan sida saxda ah ee aqoonta aaggan. Kediska madadaalada ayaa sameyn doona Maalinta Cosmonautics Day ee Dugsiga hoose saacad qabow oo runtii faa'iido leh oo aan caadi ahayn.
Maxay tahay su'aalaha ay tahay inaan ku daro casharka xilliga Dayaxa Astronautics ee dugsiga?
Hawlaha isku dhafan ee taariikhaha, magacyada yaryar oo la yaqaan ayaa ka wanaagsan in laga saaro bilowgii. Waxaa ka fiican in la qaado hawlo kala duwan oo ka caawin kara danaha carruurta, sida:
Keenista astronauts ee sawirka.
Magacaweynta xayawaanka ku dhex jira meel bannaan.
La qabsiga silsiladaha macquulka ah.
Tijaabi puzzles asalka ah.
Muuqaal kala duwan oo ka soo jeeda xasuusta.
Hawlaha farshaxanka leh ayaa ka farxin doona carruurta waxayna caawimaan inay muujiyaan naftooda iyo tayadooda. Sidoo kale waxay ka qayb qaadan karaan tartamo firfircoon oo muujinaya sida ay u culus iyo waqti dheer dadku waxay isku diyaarinayaan cosmonauts. Ka dib marka la dhammeeyo tartanka kasta iyo dhamaadka kediska, carruurta ugu khayr badan iyo kuwa caqliga leh waa in la siiyaa hadiyado wanaagsan. Tusaale ahaan saacadaha fasalka ee fasalka 1aad waxaa lagu arki karaa fiidiyowga soo socda: Si ardayda loo siiyo maalinti aan la iloobi karin ee cosmonautics ee dugsiga ayaa ka caawin doona xulashada taxadar leh lambarrada barnaamijka festifaalka. Munaasabadda asalka ah, bandhig ayaa ka caawin doonta caruurta in ay naftooda ku adkaadaan aduunka adduunka oo dhan, iyo ardayda dugsiga sare oo raaxo leh si ay u diyaariyaan bandhig, muuqaal iyo waxyaalo kale. Saacadda fasalka, waxaad ku isticmaali kartaa casharka madadaalada iyo kala hadal ardayda dugsiga hoose, su'aalaha xiisaha leh. Munaasabadaha noocan oo kale ah ayaa hubaal ah in ay ka fadhiistaan ​​labada cilmibaarayaasha yaryar iyo ardayda fasalka dhexe.
Qaadashada Sanadka Cusub 2017 ee xanaanada, iskuulka, tartanka. Sawirada carruurta ee loo yaqaan 'Cock iyo Santa Claus' oo qalin qoris ah unugyadooda u gaar ah
Epiphany of Lord 2018 (Epiphany): calaamadaha, caadooyinka iyo nasiib-sheegashada fiidkii fiidkii
Heeso ku saabsan dayrta caruurta iyo dhalinyarada. Ereyada iyo sheekooyinka ku saabsan dayrta ilaa dugsiga hoose iyo xanaanada
Waa maxay fasaxii kaniisada 14-kii October, 2016? Calaamadaha, salaadda, hambalyo. Maxaa la samayn karaa oo aan lagu qaban karin Badbaadinta Kaniisadda Quduuska ah?
Gabayada salaanta ugu fiican ee loogu talagalay Easter ee qaraabada iyo saaxiibada
Maxay labada lamaane u qorsheynayaan uur?
Saliida la shiilay oo la mariyo suugaanta pesto laga bilaabo arugula
Wedding ee qaabka oriental style
Fikrado qurxiyo loogu talagalay Sanadka Cusub 2017 Hoos-u-dhejinta indhaha, buluug iyo cagaaran, talaabo talaabo tallaabo leh sawiro iyo fiidiyoow
Sida loo soo celiyo indhashareer ka dib dhismaha?
Cannelka Almond ee leh rum
Muxuu dagaalku u egyahay?
Wedding cariga Faransiiska
Jidhka ku nadiifinta liin
Dhibaatada dumarka ee soddon sano
Sawiradu waa khiyaano: 7 ka mid ah denbiilayaasha ugu quruxda badan
Saameynta daawooyinka ku saabsan jirka ilmaha
Apple khal suufka timaha
Pearl Pearl leh maraqa
Maxay macnaheedu tahay in aad fuushan tahay dhoobada roogga riyaha ah?
Ragga ugu caansan ee taxanaha tv-ga Ruushka